Sirdoonka Ruushku waxa uu Video Sir ah ka haya Madaxwayne RUMB oo galmo la samaynaya hablo yar yar warbixin xiise leh – Murtimaal
Sirdoonka Ruushku waxa uu Video Sir ah ka haya Madaxwayne RUMB oo galmo la samaynaya hablo yar yar warbixin xiise leh
Sirdoonka Ruushku waxa uu Video Sir ah ka haya Madaxwayne RUMB oo galmo la samaynaya hablo yar yar warbixin xiise leh ..
Talefishanka CNN ee dalka Maraykanka ayaa Salaasadii dorraad ee 10kii Jeenaweri sii daayey war sheegaya in warbixin toddobaadkii hore uu sirdoonka Maraykanku gaadhsiiyey madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump iyo madaxweynaha sii tegeya Barak Obama ay ku jirtay xog sir ah oo sheegaya in koox budhcadda Internet ka ee Ruushka ahi ay sir warwar leh ka hayso madaxweynaha la doortay Donald Trump.
Talefishankan caanka ah ee CNN oo sumcad wanaagsan ku leh dalka Maraykanka gudihiisa iyo dunidaba ayaa masuuliyiin Maraykan ah ka soo xigtay in ay jirto warbixin laba warqadood ka kooban oo lagu soo ururiyey sheegashada budhcadda Internet ka ee Ruushka, waxa aana ay warbixintani ka mid ahayd warbixintii guud ee ka hadlaysay farogelinta Ruushku ku sameeyey doorashada Maraykanka.
Talefishanku waxa uu sheegay in sheegashadan budhcadda Internet ka ee Ruushku ay qayb ahaan ku jirtay xusuus qorro uu ururiyey sarkaal hore uga tirsanaan jiray sirdoonka Ingiriiska oo ay sirdoonka Maraykanku ku tilmaameen shakhsi aad loogu kalsoon yahay warkiisa.
Dhinaca kalana degalka caanka ah ee BuzzFeed oo ah shirkad warbaahineed Internet ka ah oo caan ka ah dunida xarunteeduna tahay New York ayaa war dheeraad ah oo ay arrintan ka qortay ku sheegtay in sarkaalkan sirdoonka Ingiriiska ka tirsanaan jiray, uu sheegay in wakaaladda sirdoonka Federaalka Ruushka oo magaceeda loo soo gaabiyo FBS ay hayso Fiidyowyo muujinaya Donald Trump oo ku dhex milmay xaflado ficillo jinsi iyo dhaqan xumo lagu samaynayey. Warka BuzzFeed oo uu Geeska Afrika soo akhriyey ayaa intaas ku daray in xogaha sarkaalka Ingiriiska ahi muujinayaan in Fiidoow laga hayo Donald Trump oo ka mid ah dad dhigtay xaflado jinsi oo ay isugu yimaaddeen dumarka jidhkooda ka ganacsada, waxaa Fiidyowgan ka muuqda madaxweynaha la doortay iyo dumarkan oo sariirta dusheeda ku samaynaya xidhiidh jinsi oo dhaqan xumo aad u badani ka muuqato.
Dhinaca kale waxaa warbixinahan ku cad in sirdoonka Ruushku uu hayo xogo muhiim ah oo caddaynaya sharci darro dhinaca maaliyadda iyo ganacsiga ah oo uu sameeyey Donald Trump, kaas oo ay ugu talogaleen in ay ku haddidaan Madaxweyne Donald Turmp haddii uu isku dayo in uu ka madax taago addeecista madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Degalkan ayaa sheegay in uu dhukumantiyadan sirta ah faafiyey, si dadka Maraykan ay uga bogtaan eedaha lagu tuhmayo madaxweynahooda la doortay.
Madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa waqti yar kadib markii uu warkani soo baxay ka hadlay, isaga oo sheegay in uu yahay war been abuur ah.
War laga soo saaray aqalka Kremlin ka ee looga taliyo dalka Ruushka ayaa isna lagu beenieyey in sirdoonka Ruushku uu wax xog sir ah ka hayo Donald Trump, waxa aanu warkaas ku tilmaamay been ay sameeyeen masuuliyiinta sirdoonka Maraykanku oo ay ka leeyihiin ujeedooyin siyaasadeed si loo sii wiiqo xidhiidhka Ruushka iyo Washington.
Afhayeenka aqalka Kremlin ka Dmitry Peskov oo arbacadii shalay arrintan ka hadlay ayaa isna sheegay in aanu Kremlin ku haynin wax sir fool xun ah oo la xidhiidha Trump, taas oo loogu talogalay in lagu haddido.
Xogaha kale ee la sheegay in ay ku jireen warbixinta uu sirdoonka Maraykanku u gudbiyey madaxweynaha la doortay iyo madaxweynaha xilkiisu sii dhammaanayo waxaa ka mid ah, in gacanyarayaashii Donald Trump ee xilligii doorashadu ay intii doorashadu socotay si joogto ah ula xidhiidhayeen Ruushka.
Taliyaha wakaaladda dembibaadhista ee dalka Maraykanka FBI ayaa isna xoojiyey warkii hore CIA du u sheegtay ee muujinayey in Ruushku uu Trump ka caawiyey guusha doorashada. Agaasimaha FBI, James Comey waxa uu sheegay in budhcadda Internet ka ee Ruushka ee jabsaday Kombiyuutarradii ol’olaha Hilary Clinton aanay isku dayin in ay sidoo kale jabsadaan kuwa Trump. Warkan agaasimaha FBI du waxa uu si dadban u sheegayaa in ujeedka Ruushku ku jihaysnaa uun Hilary Clinton iyo xisbigeedu sidii ay u dhici lahaayeen.
Previous Post:DAAWO MAXAA KALA QABSADAY FAYSAL CALI WARAABE IYO CAGMADHIGE
Next Post:Hooyo waxa lagaga digaya inaad caruurta afka ka dhunkato